राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै देशको ठुलो भ्रष्टाचारी रहेको जनताको निष्कर्ष ! – नेपाली सूर्य
November 25, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै देशको ठुलो भ्रष्टाचारी रहेको जनताको निष्कर्ष !
काठमाडौं। एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले उल्लेख गरेको छ । ५८ प्रतिशत नेपाली भन्छन्, ‘एक वर्षमा भ्रष्टाचार झन् बढेको छ।’
त्यस्तै, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार घटबढ नभई उही स्तरमा रहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ।
एमसिए नेपालका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश यादवको कोरोनाबाट निधन
हे भगवान् ! यो कस्तो बच्चा जन्मियो नत हात छ नत खुट्टा ,कठै रुवाबासि (हेर्नुस् भिडियो )
August 17, 2021 Nepali Surya